सुन्छ गीत नेपाली – मझेरी डट कम
सुन्दर शान्त विशाल… … ।
स्वदेश गान सुन्दा मलाई यसरी नै जीउभर िकाँडा उमि्रएको अनुभूति हुन्छ । साथीहरूसँग यो अनुभव बाँड्दा ‘सबैलाई त्यस्तो हुँदैन’ भन्ने भनाइ आयो । होला, त्यसैले त कतिपयले ‘ह्याऽऽ… नेपालमा के छ र ! अर्कै देशले लिए पनि हुन्छ’ भन्छन् । तर, त्यस्तो सोच्दा मात्र पनि मेरो मुटु ढुकढुक गर्छ । मानौँ कसैले मेरी आमाको हत्या गरेर उसकी आमा नै मेरी आमा हो भनेको होस् । कसरी मान्नु ? भरपेट खान दिन नसके पनि, संसारका सबै सुखसयल दिन नसके पनि आफ्नी आमा भनेको आफ्नै हुन् । कसैकी आमा सम्पन्न होलिन्, कसैकी विपन्न । कसैकी मायालु होलिन् त कसैकी अलि कडा मिजासकी । तर, त्यसो हुँदैमा हामी आफ्नी आमालाई अर्कैले लगेर सुधारी दिए पनि आनन्द हुन्थ्यो त भन्न सक्दैनौँ नि ! नेपाल आमाका सन्दर्भमा भने कतिपयले कपुतझैँ अभिव्यक्ति दिन्छन् । जननी अर्कैकी भएपछि हाम्रो पहिचानचाहिँ के त ?
मेरो टोपी हिमाली भीरजस्तो ऽऽऽ… … ।
अब मलाई अरू केही चाहिएन । समाचार आओस् कि जेसुकै, देशभक्तिका गीत मन पराउनु, त्यसमा आनन्द लिनु अचम्मकै अनुभूति रहेछ । कत्तिलाई यो ‘बोरडम’को अवस्था लाग्दो हो त कतिलाई ‘ओल्ड फेसन्ड’ । यद्यपि, स्वदेश गान मन पराउनु भनेको सामान्यतया अरू मायाप्रीतिका गीत वा गजल मन पराएजस्तो होइन रहेछ । अरू गीत प्रायः धुन र आवाजका कारण मात्र पनि मन पराइन्छन् । तर, स्वदेश गानमा शब्द र भावना महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुराचाहिँ सुन्नेको भावना नै हुन्छ । राष्ट्रलाई अरूको हातमा सुम्पदा हुन्छ भन्नेहरूमा सायद त्यस्तो भावनाको अभाव हुँदो हो । लगत्तै अर्को गाना बज्न सुरु भयोः
अन्धकारमा चम्कन्छ… … ।
यो उत्साही गानले त ममा नयाँ ऊर्जा नै थपिदियो । मैले रेडियोको ‘भोल्युम’ अझ ठूलो पारेँ । लगभग दुई वर्षको छोरा नाच्न थाल्यो । आँगनमा उभिएका मेरा साथीले सोधे, “कुन एफएम रै’छ, हँ ?”
“खै कुन्नि, अहिलेसम्म नामै बजाएको छैन । खुरुखुरु गाना मात्र दिरा’छ । यस्तो गाना तपाईंलाई पनि मन पर्छ ?”
“कस्तो कुरा गरेको, मन परहिाल्छ नि !”